गण्डकी प्रदेश | Nepal Flash
नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशवासीको स्वास्थ्यका लागि सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । प्रदेश मातहतको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको बिहीबार निरीक्षणपछि उनले प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतमा राखेर सरकारले बजेट बनाएको बताए । कोभिड नियन्त्रण...
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रहरीलाई सवारी साधन हस्तान्तरण
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरुका लागि सवारी साधन हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले प्रहरीका लागि अत्यावश्यक चार थान टाटा पिकअप भ्यान र एक थान बस बिहीबार प्रदान गरेको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले...
गण्डकी प्रदेशसभा : विपक्षी दलको अवरोध, सांसदले टेबल फाले
पोखरा । बजेट पारित गर्ने क्रममा गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले सांसदले बैठकमा अवरोध सिर्जना गरे । उनीहरूको अवरोधकै बीच प्रदेशसभामा बजेट भने पारित भएको छ । आज (बुधबार) प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पारित गर्ने कार्यसूची थियो...
समृद्ध प्रदेश सबैको साझा लक्ष्य : पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङ
गण्डकी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले समृद्ध प्रदेश सबैको साझा लक्ष्य भएको बताएका छन् । नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलद्वारा शनिबारपोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेकपा एमाले सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष...
गण्डकी प्रदेश : नीति तथा योजना आयोग सदस्यमा अधिकारी नियुक्त
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा तनहुँ म्याग्देका डा. सुवास अधिकारी नियुक्त भएका छन् । अधिकारीलाई आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले सोमबार सपथ गराए । आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा...
मुख्यमन्त्री पोखरेलको प्रेस संयोजकमा भरत कोइराला नियुक्त
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र (नेपाली) पोखरेलको प्रेस संयोजकमा आदर्श समाज दैनिकका सम्पादक भरत कोइराला नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारबसेको बैठकले उनलाई प्रेस संयोजकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । दुई दशकअघि अन्नपूर्ण पोष्टदेखि पत्रकारिता सुरु गरेका कोइरालाले...
पोखरा । मनाङका १६ वटा सरकारी कार्यालयका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सोलार प्यानल, इन्भर्टर र ब्याट्री उपलब्ध गराएको छ । बिजुली नभएका कारण अस्पतालको उपचार सेवा र सरकारी काम प्रभावित भएकाले सोलार खरिद गरी पठाइएको हो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री...
कृषिको व्यावसायिकता वृद्धि गर्न इजरायलसँग सहकार्य हुँदै छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कृषिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी व्यावसायिकता वृद्धि गर्न इजरायलसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोडेरसँग मङ्गलबार पोखरामा भएको भेटमा उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले युवा किसानलाई...